Miezaha Hiteny Zavatra Tsara sy Mampahery | Mamaky Teny & Mampianatra
Miezaha Hiteny Zavatra Tsara sy Mampahery
AHOANA IZANY? Aza mandany fotoana be miresaka olana, fa ny vahaolana no asongadino. Zavatra mampahery foana resahina.
Aza tonga dia eritreretina hoe tsy hiova intsony ny olona iresahanao. Matokia hoe te hampifaly an’i Jehovah ny mpiara-manompo aminao. Rehefa hanoro hevitra azy ireo ianao, dia derao aloha izy noho izay zavatra tsara vitany.
Miezaha ho sariaka sy ho tsara fanahy, mba ho tsapany hoe tsy tezitra aminy ianao fa azonao tsara ny mahazo azy.
Aza mandany fotoana be miresaka olana. Aza miresaka zavatra mahakivy, raha tsy hoe tena ilaina ao amin’ilay anjaranao angaha izany. Tokony ho zavatra mampahery foana no hisongadina ao amin’ilay izy.
Ampiasao ny Tenin’Andriamanitra. Lazao, ohatra, hoe inona no efa nataon’i Jehovah ho antsika, dia inona ny zavatra ataony izao, ary inona no mbola hataony. Zavatra mampahery sy manatanjaka finoana no resaho.
ANDRAMO IZAO REHEFA MANOMPO
Tadidio hoe mety mbola ho lasa mpiara-manompo aminao ny olona itorianao.
Miezaha Hahay Hamaky Teny sy Hampianatra: Miezaha Hiteny Zavatra Tsara sy Mampahery